I-EIBOARD izimase uMboniso wama-80 weziXhobo zeMfundo yaseTshayina ngempumelelo!
I-EIBOARD izimase uMboniso wama-80 weziXhobo zeMfundo yaseTshayina ngempumelelo! Iqela le-EIBOARD lizimase umboniso wama-80 wezixhobo zemfundo zaseTshayina ngo-Okthobha wama-23-25, 2021. Ngomxholo othi “Ukuxhotyiswa kwe-IOT, uBulumko Fusion!”, sibonise ibhodi erekhodiweyo ye-LED erekhodiweyo yeV4.0 entsha ...
Utshintsho oluziswe yi-smart board kwindlela yokufundisa
Kwinkqubo yokufundisa eqhelekileyo, yonke into igqitywa ngutitshala. Umxholo wokufundisa, izicwangciso zokufundisa, iindlela zokufundisa, amanyathelo okufundisa kunye nemithambo yabafundi icwangciswa ngootitshala kwangaphambili. Abafundi banokuthatha inxaxheba kuphela kule nkqubo, oko kukuthi, ...
Indlela yokwenza uninzi lweLed interactive touch screen ngeendlela ezi-4?
Yenza uninzi lolwazi lobuso ngobuso - ukubhala ngaxeshanye. Fumana wonke umntu okwintlanganiso ukuba athathe inxaxheba kumanqaku abhalwe ngesandla (ukuqatshelwa kokubhala ngesandla kuguqula umbhalo wesandla wesikrini okhethiweyo ube kumbhalo oqhelekileyo. Sebenzisa umxholo okwisikrini ukwenza imizuzu yentlanganiso ecacileyo necacileyo). Yenza u...
Indlela yokukhetha imveliso efanelekileyo yokufundisa ngonxibelelwano eklasini?
Xa sikhetha ibhodi ehlakaniphile yokufunda okusebenzisanayo, ezi zitshixo zingezantsi ziya kuba yireferensi efanelekileyo. Uqhagamshelo Nokuba yiprojektha, ibhodi emhlophe, okanye ibhodi yokucofa, ootitshala kufuneka bakwazi ukuqhagamshela izixhobo zabo (kunye nabafundi) ukuze basebenzise uninzi lwayo. Cinga ngokuguquguquka kwi-acro...
Isizukulwana esitsha sebhodi esebenzayo esebenzayo
Ngoku sikwizigaba zophuhliso olukhawulezayo lwenguqu kwezobuchwepheshe kwicandelo lezemfundo. Kwisithuba seminyaka emine ukuya kwemihlanu ezayo, kuqikelelwa ukuba izikolo ezininzi ziya kuthatha indawo yeebhodi ezimhlophe ezinxibelelanayo zesimbo samandulo ngezikrini ezintsha “ezikhulu zesikrini” ezisebenzisanayo. Ithetha ntoni le nto ...
Isoftware yenkomfa yevidiyo yemveli iqalisa uhlaselo kwicala leVR, kwaye intlanganiso yeZoom iya kutyhala inguqulelo yeVR.
Isoftware yenkomfa yevidiyo yemveli iqalisa uhlaselo kwicala leVR, kwaye intlanganiso yeZoom iya kutyhala inguqulelo yeVR. Okokugqibela, isoftware yenkomfa yevidiyo yemveli yaqalisa uhlaselo kwicala leVR. Namhlanje, iZoom, enye yeyona software inkulu yenkomfa yevidiyo, yabhengeza ...